घर जग्गा लगानी अभिलेखहरू - घर जग्गा ब्लग - रियल्टी डब्ल्यूडब्ल्यू:
श्रेणी अभिलेखालयबाट: घर जग्गा लगानी
प्रकाशित मार्च 11, 2020 by ह्यारी सिजर
अन्तिम अद्यावधिक गरिएको: मार्च 11, 2020 11: 04
किन हरियो एड-ऑनहरू वा ऊर्जा-दक्ष सुविधाहरू भएको नयाँ घर खरीद गर्न लाभदायक छ
जब तपाइँ "हरियो घर" भन्ने शब्द सुन्नुहुन्छ, के हरियो रंगको घर दिमागमा आउँछ? वा सायद, पोखरीमा घर बाहिर यार्डमा धेरै हरियालीहरू छन्? केहीको लागि यो गर्छ, तर यसको मतलब यो होइन। हरियो घर एक पर्यावरण अनुकूल घर हो। त्यो घर ऊर्जा र पानी बचाउन निर्माण गरिएको हो, र साथसाथै कुनै पनि चीजलाई रिसाइकल गर्न सकिन्छ।
किन तपाईं हरियो घर खरीद वा बनाउनु पर्छ
- यो भविष्य हो!
पारिस्थितिक घरहरू लोकप्रिय छन्। धेरै सरकारले वातावरण संरक्षणको पक्ष लिने र घर निर्माणसम्बन्धी कानूनमा उनीहरूलाई समावेश गर्ने नीतिहरू अपनाइरहेका छन्।
घर निर्माणकर्ताहरू साथै जलवायु परिवर्तनको बारेमा बढी सचेत छन्। त्यसैले अधिक र अधिक हरियो घरहरू घर निर्माणको पुरानो तरिकाहरू पछाडि छोडियोको साथ आउँदैछन्।
- यो तपाइँको वालेट को लागी महान छ
वातावरणको हेरचाह बाहेक, हरियो घर बनाउने वा किन्नको लागि वित्तीय समझ मिल्छ किनकि यसको नियमित घरको भन्दा बढी मूल्य हुन्छ।
इकोलोजिकल घरहरू ऊर्जा-कुशल उपकरणहरूमा चल्दछन् र प्रत्येक तरिकामा बिजुली बचत गर्नको लागि निर्माण गरिन्छन्, जसले लामो समयसम्म घरमालिकाहरूको लागि धेरै बचतमा अनुवाद गर्दछ।
हरियो घर बनाउन पनि पुनर्चक्रित सामग्रीको प्रयोग समावेश हुन्छ जसको प्रायः कम खर्च आउँछ, र त्यस मार्गमा, अधिक पैसा बचत हुन्छ। उदाहरण को लागी, तपाइँ घर बार गर्न वा चिरस्थायी फर्नीचर निर्माण गर्न पुनर्चक्रित सामग्री प्रयोग गर्न सक्नुहुनेछ। हरियो घरहरूले फोहोरलाई काटेर वातावरण बचाउँदछन्।
- सुविधाहरू तपाईंको बगैचामा विस्तार
इको-घरहरूले तिनीहरूको डिजाइनमा हरियो परिदृश्य समावेश गर्दछ। हरियो परिदृश्य जहाँ तपाईं आफ्नो बगैंचामा वनस्पति रोप्नुहुन्छ कि तपाईं पैसा, ऊर्जा, र समय बचत गर्न मद्दत गर्दछ। यी बोटहरूले तपाईंको घरमा फोहोर र प्रदूषण पनि कम गर्नुपर्दछ।
तपाईंको घरमा हरियो ल्याण्डस्केपिing समावेश गर्ने उत्तम तरिका भनेको बढेको बोटबिरुवाहरू जुन तपाईंको क्षेत्रका स्थानीय हुन्। नेटिभ बोटहरू कम पानी, उर्जा, र समय लिनको लागि लिनुहोस् र फस्टाउनेछ, तपाईंको घरको सुन्दरतामा थप्न। चाल भनेको आक्रामक देशी बोटबिरुवाबाट जोगिनु हो जुन अन्य बोटबिरुवाहरू काटेर यस क्षेत्रको हरियालीलाई नष्ट गर्दछ।
तपाईं बोटबिरुवाहरू तपाईंको घरको छहारीमा र घर कूलि costs लागतहरूमा कटौती गर्न प्रयोग गर्न सक्नुहुनेछ। केवल घरको छेउमा पातलो रूखहरू रोप्नुहोस् जुन अत्यधिक सूर्य पाउँछ। धेरै पानी नहुने स्थानहरूमा सुख्खा प्रतिरोधी बोटबिरुवा रोप्नु पानीको प्रयोगमा कटौती गर्ने अर्को उत्तम तरिका हो।
तपाईको घर हरियो घरमा बदल्नुहोस्
पहिले नै घरको मालिकको लागि, तपाईले बेच्नु हुँदैन वा हरियो जान जानु हुँदैन, तपाईले आफ्नो घर नवीकरण गर्न सक्नुहुन्छ र यसलाई ऊर्जा बचत गर्ने घरमा बदल्न सक्नुहुन्छ। यो एक क्रमिक प्रक्रिया हो जुन तपाईंको घर स्तरवृद्धि गर्दछ, यसको मूल्य थप गर्दछ, साथ साथै तपाईंलाई वातावरण संरक्षणको लागि तपाईंको अंश गर्न अनुमति दिँदछ।
तरीका तपाई आफ्नो घर पर्यावरण अनुकूल बनाउन सक्नुहुन्छ
- ऊर्जा कुशल उपकरणहरु को लागी
धेरै पुरानो उपकरणहरू, जस्तै कपडा ड्रायर, वाशर र फ्रिजहरू, धेरै शक्ति खपत गर्दछन् र वातावरणमैत्री छैनन्। त्यसो भए, तपाईंको घरमा भएका सबै पुराना उपकरणहरूको आधुनिक उपकरणहरू बदल्नुहोस् ऊर्जा स्टार प्रमाणित.
यसका अन्य फाइदाहरू पनि छन्। उदाहरण को लागी, केहि राज्यहरु वा इलाकाहरु रिसाइक्लि and र ऊर्जा कुशल उपकरणहरु को खरीद मा छूट दिन्छ।
एक सरल चाल जस्तै तपाईको इनकन्डेन्सेन्ट बल्बलाई ऊर्जा बचत गर्ने एलईडी बल्बहरू बदल्नको लागि धेरै लिदैन।
तपाईं आफ्नो घर इन्सुलेट गरेर पनि ऊर्जा बचत गर्न सक्नुहुन्छ। यो सुनिश्चित गर्नेछ कि तताउने लागतहरु लाई काटेर घरबाट कुनै ताप हुँदैन। घर निर्माण विशेषज्ञले फोम स्प्रेing इन्सुलेशन प्रयोग गरेर वा ऊर्जा-सक्षम विन्डोजहरू स्थापना गरेर तपाईंको घरलाई इन्सुलेट गर्न मद्दत गर्दछ।
- पानी कुशल घर उपकरणहरुमा शिफ्ट
तपाईं पानीको प्रयोग घटाउने उपकरणहरू पनि खरीद गर्न सक्नुहुन्छ। उदाहरणको लागि, केहि वाशिंग मेशिनहरू कम पानी प्रयोग गर्न बनाइन्छन्।
तपाईंको प्लम्बिंगमा पानी रिसाइक्लि plant प्लान्ट स्थापना गर्नाले घरबाट पानी खेर फालिएको छैन र कुनै रिसाइकल गरिएको पानी तपाईंको बगैंचामा सिंचाई गर्न प्रयोग गर्न सकिन्छ
- पर्यावरणीय ईन्धन स्रोत प्रयोग गर्नुहोस्
यो पनि जीवाश्म ईन्धन ऊर्जाबाट हरियो ऊर्जामा सर्ने समय हो। यसको मतलब ईन्धन स्रोतहरूमा सर्नु हो जुन उत्पादन हुँदा पृथ्वीलाई नष्ट गर्दैन र वातावरणमा हानिकारक उत्सर्जन पनि छोड्दैन। यहाँ धेरै विकल्पहरू छन् तर एउटा बाहिर खडा छ सौर्य ऊर्जा।
सूर्य सँधै हुन्छ, र यो निःशुल्क उर्जाको एक महान स्रोत हो। सौर्य प्यानलहरूले तपाइँको पानी र तपाइँको घर तात्न मद्दत गर्दछ र बिजुलीको लागि अतिरिक्त विकल्प पनि प्रदान गर्दछ। यदि तपाइँ तपाइँको सौर प्यानलबाट अधिशेष बिजुली उत्पन्न गर्नुहुन्छ भने, तपाइँ यसलाई केहि क्षेत्रहरुमा बिजुली कम्पनीहरु लाई बेच्न सक्नुहुन्छ।
जब सबै भनिन्छ र गरिन्छ, मौसम परिवर्तनको मुद्दा उपेक्षा गर्न सकिँदैन। अब हरियो घरमा लगानी गर्नाले भविष्यमा तपाईले भन्दा बढि खर्च गर्नबाट बचाउनु हुनेछ। यदि तपाईं पहिले नै घरको मालिक हुनुहुन्छ भने, हरियो समाधान र उपकरणहरूमा जान सुरु गर्नु राम्रो विचार हो। धेरै नै कम्तिमा पनि यसले तपाईंको घरको मूल्य बढ्नेछ, र उत्तममा तपाईले वातावरणको संरक्षणका लागि कार्य गरिरहनुहुनेछ।
पोस्ट हरियो घर जग्गा, घर जग्गा लगानी | Tagged नयाँ घर | टिप्पणी छोड्नुहोस् |
प्रकाशित डिसेम्बर 20, 2019 by realtyWW
अन्तिम अद्यावधिक गरिएको: डिसेम्बर 20, 2019 08: 49
सम्पत्तीमा लगानीको बारेमा संक्षिप्त दिशानिर्देशहरू
सम्पत्ति लगानी एक उच्च आकर्षक व्यवसाय को साबित हुन सक्छ यदि राम्रो गरीन्छ भने। सम्पत्ति लगानीमा प्रमुख रूपमा अफ-योजना सम्पत्ति खरीद गर्ने वा तिनीहरूमा लगानी गर्ने समावेश छ। यो खरीदलाई बढाउने र बेच्नको प्रोत्साहनको साथ हो र उच्च फिर्ताको लागि यसलाई पट्टामा लिन्छ। सम्पत्ति लगानी एक जटिल प्रक्रिया हो र त्यहाँ कुनै पनि आकारको सबै फिट हुँदैन। त्यसोभए, तपाईंले वरपरको सम्पत्ति बजारको सही समझ लिनुपर्नेछ। यहाँ केहि सुझावहरू छन् जुन तपाईंलाई तपाईंको सम्पत्ति लगानी फलाउन मद्दत गर्दछ। त्यसो भए, तपाईंको दृष्टि चौडाउनको लागि निम्न सम्पत्ति लगानी सल्लाह पढ्नुहोस्।
क्षेत्रको पूर्ण अनुसन्धान गर्नुहोस्: कुनै पनि सम्पत्तिमा लगानी गर्नु अघि भविष्यको बारेमा निश्चित गर्नुहोस् र सम्पत्तीको भाँडा माग गर्नुहोस्। जब निम्न क्षेत्रहरूमा पहुँच गर्दा निम्न कोटीहरूले राम्रोसँग काम गर्दछन् त्यसैले तिनीहरूलाई छनौट गर्नुहोस् जुन यी आधारभूतहरूको अधिकतम छ। पर्यटन वृद्धि, पसल, यातायात लिंक, स्कूल, लगानी, रोजगार।
कुनै पनि सम्पत्ति किन्नु अघि, यो निश्चित गर्नुहोस् कि यो तपाईंको समय ऊर्जा र लागतको लायक छ। समग्र टर्नआउट लागत गणना गर्नुहोस् र निश्चित गर्नुहोस् कि तपाईंको लगानीको साथै यसले तपाईंको समय र उर्जा भुक्तान गर्दछ।
तपाईं छोटो अवधिको लगानीको लागि होटल कोठा र छुट्टी रिसोर्ट लगानीहरूमा विचार गर्न सक्नुहुन्छ। यी लगानीहरूले खरीद गर्न दिनुहोस् भन्ने घटनालाई राम्रोसँग नक्कल गर्दछ, छोटो अवधिमा भाडामा लिनेहरू पनि तपाईंले गर्नु पर्ने सबै होटलहरूको जिम्मेवार हुन्छन् र लगानीको लागि प्रतिक्षा गर्नुहोस्।
कहिले पनि तपाईको पैसालाई बढ्तैमा खर्च नगर्नुहोस् सम्पत्ति लगानी सल्लाह पाठ्यक्रमहरू। त्यसो भए, ती उच्च मूल्यको पाठ्यक्रमहरूबाट टाढा रहनुहोस् जसले रियल इस्टेट रहस्य भन्छ किनभने त्यहाँ कुनै रहस्यहरू छैनन्, तपाईं साधारण गुगल खोजीबाट सबै कुरा सिक्न सक्नुहुनेछ।
सम्पत्ति लगानीको लागि एक्लै नजानुहोस् जसले साधारण प्रक्रियालाई जटिल बनाउँदछ बरु तपाईले मोर्टेगेज ब्रोकर, सलिसिटर, स्रोत (कम्पनी वा व्यक्ति), सल्लाहकार (यो औपचारिक वा अनौपचारिक हुन सक्छ) र मर्मत गर्ने व्यक्ति वा बिल्डर समावेश गर्ने टोलीको लागि छनौट गर्नुपर्दछ। साथै, निम्न टोलीहरू छान्नका लागि सन्दर्भका लागि सोध्नुहोस्।
तपाईले बढि विकल्पहरू खोजिरहनुपर्नेछ यदि तपाईले स्वीकार गर्नुभएको छ भने पनि। ठीक छ, यो सम्पत्ति यति गिरावट को लागी धेरै समय लिने छैन; तपाईंसँग दोस्रो विकल्प तयार हुनुपर्दछ।
तपाइँ तपाइँको लगानी मा एक भावी एजेंट राय को लागी जानु पर्छ।
स्थानीय क्षेत्रहरूमा आफैलाई प्रतिबन्ध नराख्नुहोस् जसको परिणाम स्वरूप तपाईं केही उत्तम लगानी गुमाउन सक्नुहुन्छ।
सम्पत्ति लगानीमा दुबै लागतको मन्त्र राख्नुहोस् र दिमागमा तीन गुणा अधिक खर्च गर्नुहोस्, किनकि यसले तपाईंलाई कुनै पनि अचानक जटिलताहरूसँग डिल गर्न मद्दत गर्दछ जुन तपाईंले पहिले सोचेको छैन।
उच्च उत्पादन सम्पत्ती तिर हतार नगर्नुहोस् किनकि प्रस्ताव तपाईंलाई धेरै उत्साहित नहुन सक्छ एकको लागि तपाईंको खातामा स्थान्तरण भइरहेको छ। तसर्थ, एक सम्पत्ति लगानी सल्लाह म तपाईंलाई दिन चाहन्छु कि तपाईंले कहिल्यै उच्च उपजको लागि आफ्नो आधारभूत कुराहरूमा सम्झौता गर्नु हुँदैन।
सम्पत्ति लगानीहरूको लागि फरक बैंक खाता प्रयोग गर्नुहोस् जुन सबै समस्याहरूलाई रोक्नेछ।
प्रत्येक वर्ष तपाईले सम्पत्ति लगानीहरूको पुनर्मूल्या .्कन गर्नु पर्छ जसले तपाईलाई कहाँ उभिरहेको छ भनेर बुझ्न मद्दत गर्दछ।
एउटा अन्तिम कुरा, जुन तपाइँ सुरूबाट गर्नुपर्दछ तपाईको निकासको योजना गर्नु हो। तपाईंसँग पूर्ण योजना हुनुपर्दछ जुन तपाईंको निकास स्वीकार गर्दछ।
पोस्ट घर जग्गा लगानी | टिप्पणी छोड्नुहोस् |
प्रकाशित नोभेम्बर 18, 2019 by एमेली लरेन्स
अन्तिम अद्यावधिक गरिएको: नोव 18, 2019 04: 45
छोटो बिक्री सम्पत्ति खरीद गर्नु अघि कसरी तयारी गर्ने?
घर जग्गा लगानीकर्ताहरूले छोटो बिक्रीमा प्रस्ताव गरिएका सम्पत्तिहरू खरीदमा चासो लिन्छन् किनकि उनीहरूले राम्रो सम्झौता सुँघ्छन्। यद्यपि, छोटो बिक्री सम्पत्ति खरीद गर्ने बारे निर्णय गर्न सावधान हुनुपर्दछ किनकि लेनदेन कुनै खास घर खरीद गर्न जत्तिकै सरल नहुन सक्छ, विशेष गरी एक्सएनयूएमएक्स दिन वा अघिल्लो भन्दा पहिलेको बन्द हुने निष्कर्ष निकाल्ने चुनौतीपूर्ण हुन सक्छ। सब भन्दा महत्त्वपूर्ण, एक छोटो बिक्री मा एक सम्पत्ति प्राप्त गर्न मा सफल हुन को लागी बुझ्नु पर्छ, existingणदाता एक अवस्थित धितो धितो छ कि छूट को अदायगी स्वीकार गर्न सहमत हुनु पर्छ। यदि विक्रेताले छोटो बिक्रीको लागि एक सम्पत्ति सूचीबद्ध गर्दछ, यसले विक्रेताको छूट मूल्यमा सम्पत्ति बेच्न इच्छुकता देखाउँदछ, तर यसको मतलब यो होइन कि योसँग nderणदाताको सहमति छ, जुन theणदाताले छुट्टै पुष्टि गर्नुपर्दछ। पढाइ जारी राख्न →
पोस्ट घर जग्गा लगानी | Tagged रियल एस्टेट | टिप्पणी छोड्नुहोस् |
प्रकाशित नोभेम्बर 6, 2019 by realtyWW
अन्तिम अद्यावधिक गरिएको: नोव 6, 2019 15: 17
कन्डोस अहिलेको कुरा किन हो?
के तपाई आफ्नो साथीको शहरको नयाँ दुई बेडरूम कोन्डो दृश्य हेरेपछि कन्डोमा जान लाग्नु भएको छ? यस्तो विशाल निर्णय गर्नु अघि तपाईंलाई थप जानकारीको आवश्यक पर्दछ। "तपाईं अहिले किन चीज गर्नुहुन्छ?" तपाईलाई अचम्म लाग्यो।
कन्डोमिनियमहरूको बिक्री पोइन्टहरू:
आधुनिक कन्डोहरू पुरानो कन्डोको सामान्य स्थान भन्दा बढि स्क्वायर फुटेजका साथ बढी प्रख्यात छन्। आधुनिक कन्डोहरू नयाँ परिवार घर हुन् जसमा खरीददारहरू र भाडामा लिनेहरू प्रशस्त तीन बेडरूम युनिट खोज्दैछन्।
शहरको क्षितिजलाई हेरेर भूइँमा छतमा विन्डोज हुनुहुन्छ जहाँ तपाईं बन्न चाहानुहुन्छ तपाईंले दाखमद्यको गिलास चुस्नुभयो र सूर्यास्त हेर्नुहोस्। अधिक आधुनिक स्थानको साथ, कन्डोका बासिन्दाहरू एउटा दृश्य हेर्न चाहन्छन् - जुन कुरा जुन पुरानो कन्डोले प्रदान गर्दैन।
निर्माणकर्ताहरूले पैदल यात्रा, बच्चाहरूको लागि खेल मैदान, कमन्स क्षेत्र, र मालिकहरूको आनन्द लिन बगैंचा जस्तो सुविधाहरू समावेश गर्दै छन्। कन्डोहरू ठूलो लेआउटको साथ परिवारहरू फिट गर्नको लागि पनि निर्माण भइरहेको छ। केहि फ्लोर योजनाहरूमा आया, सासु, वा अतिथिहरू राख्न व्यक्तिगत क्वार्टरहरू समावेश हुन सक्छन्।
केहि कन्डोहरू खरिदकर्ताको आवश्यकता अनुसार निर्माण हुन्छन्। तिनीहरू पनि ब्लाउन्ड वा तूफान को रूप मा मौसम को स्थिति का सामना गर्न निर्माण भइरहेको छ।
एक खरीददारको रूपमा, के तपाईंको नयाँ स्थानको लागि दिमागमा भान्साको डिजाइन छ? ठेकेदारसँग तपाईंको विचारको बारेमा कुराकानी गर्दा तपाईंको सपनाको भान्छामा तपाईंलाई भूमि आउन सक्छ। केही परिवारहरूको लागि, भान्साको केन्द्र बिन्दु हो र मनोरञ्जन, रमाईलो, र अधिकको लागि आवश्यक पर्ने कुराको लागि बनाईएको हो।
नयाँ कन्डोमा सबैभन्दा ठूलो चलनहरू मध्ये एक हो खाली भान्साकोठानयाँ गृह स्रोत अनुसार। एक पातलो र आधुनिक घर खोज्दै, भाडामा लिनेहरू र खरीददारहरूले लुकेका उपकरणहरू, केन्द्र टापुहरू, र खुला आश्रयको साथ एउटा भान्साको खोजी गरिरहेका छन्।
खरीददारहरू र भाडामा लिनेहरू अप-टु-डेट चाहनुहुन्छ, आधुनिक घर अनुकूलन र colors्ग, फ्लोरहरू र छतका साथ। हो, एक अनुकूलित छत। दिनहरू गए जहाँ ठाउँ ओभरहेड खेर फालियो। तपाइँको छत अब लहजे, बनावट, र अनुकूलन रंग संग आउन सक्छ।
के तपाईं टाढाको कामदार हुनुहुन्छ र घरमा एउटा कार्यालय चाहिन्छ? नयाँ कन्डो स्मार्ट घर टेक्नोलोजीको साथ बनेको छ। हुनसक्छ तपाई काम गर्दा घरबाट बाहिर आउनु पर्छ। खरीददारहरूले कन्डोमा हेरिरहेका छन् जुन वाइफाइ वा एक सह-कार्य गर्ने ठाउँको साथ समुदाय केन्द्रहरू प्रस्ताव गर्दछ।
कन्डोसको बढ्दो लोकप्रियताको साथ, यी घरहरूको बनावटमा पर्यावरण-अनुकूल सामग्रीको माग पनि छ। केही पर्यावरण अनुकूल तरिका बिल्डरहरूले कन्डोसलाई हरियो बनाउँदैछन् प्रकाश, उपकरणहरू, र प्रयोग गरिएको र through्गका माध्यमबाट।
हरियो कोन्डोमा ऊर्जा स्टारका उपकरणहरूका साथ एलईडी लाइट बल्बहरू स्थापना गरियो। कन्डोसको लागि अर्को हरियो जीवित अवयव भनेको चिप बिना नै फर्श प्रयोग गर्नु हो। हरियाका जीवनका लागि बाँस फर्श त्यस्तै लोकप्रिय सामग्री हो।
सामुदायिक छाना बगैंचा चिसो महीनामा कोठाको छानालाई इन्सुलेट गर्न मद्दत गर्ने हरियाली-रूफटप बगैंचामा पनि सहयोग गरिन्छ। बगैंचा आँगनहरु गर्मी महीनहरु को मा हावा चिसो।
निर्माणकर्ताहरूले कन्डोमा उच्च-दक्षता हीटिंग, कूलि,, र वेंटिलेसन प्रयोग गर्दैछन्। कम प्रवाह faucets र शौचालयहरु ऊर्जा दक्षता मा सहयोग। घरको भित्ताहरू इको-मैत्री छन्, रिसाइक्ल गरिएको सामग्रीका साथ बनाइएको सामग्री प्रयोग गरेर।
तपाईं दुबै साना र ठूला फ्लोर योजनाहरू फेला पार्न सक्नुहुनेछ। के तपाईं खाली-नेस्टर हुनुहुन्छ जुन ग्रान्डिभिड्स भ्रमणको लागि सिलाई कोठा र पाहुना कोठा चाहान्छन्? वा तपाईं भर्खरै विवाहित जोडी परिवार शुरू गर्दै हुनुहुन्छ? आजको दिनको कन्डोसँग तपाईंको आवश्यकता अनुरूप एक सजावट छ।
अधिक र अधिक हजार वर्ष देखभालकर्ताहरू बनिरहेका छन्, र पहिलो पटक घर खरीददारको रूपमा, उनीहरू आमाबुवाको आवश्यकतालाई पूरा गर्न सासु-ससु सुइट खोज्दैछन्। मुख्य फ्लोरको एक मिनी-अपार्टमेन्टबाट एकल बेडरूमको कक्षमा आवश्यक छ।
सहस्राब्दी खरिदकर्ता वा भाडामा लिने अर्को प्रमुख बिक्री बिन्दु एक कन्डो हो जुन स्वास्थ्य र स्वास्थ्यमा केन्द्रित छ। कन्डो निवासीहरू घर, मन, शरीर, र आत्मा कल्याण मा बदलिरहेका छन्। जिम, फ benefits्ग शुई बगैंचा, र मसाज कोठा जस्ता सुविधाहरू मार्फत उनीहरूका यी सुविधाहरू प्राप्त गरिरहेका केही तरिकाहरू।
भाँडामा लिँदा वा मालिकहरूको लागि कन्डो खरीद गर्दा स्थान आवश्यक हुन्छ। उनीहरू आफ्ना बच्चाहरूको स्कूलको नजिक, अस्पताल नजिक वा सार्वजनिक यातायातको नजिक आधुनिक घर चाहन्छन्।
समुदाय र सुरक्षाको अनुभूति भाँडामा लिने वा क्रेताको लागि सूचीमा उच्च छ। एक छत आँगन मा बिहानको कफी तपाईको छिमेकी संग चिया को कप जस्तो लाग्छ? वा लिफ्टमा प्रवेश गर्दा छिमेकीको मुस्कान। यी केहि तरिकाहरू छन् जुन कन्डो लिविंगको समुदायले तपाईंलाई अन्यले अपील गर्दछ।
अधिक खरीददारहरू र भाडामा लिनेहरूले सामान्य जग्गा र घर प्याकेजको सट्टा पहिलो परिवार घरको रूपमा कन्डोलाई हेरिरहेका छन्।
कन्डो बनाम घर:
कन्डोज लागत प्रभावी र घर खरीद गर्न को लागी कम हो।
बाह्य मर्मत र मर्मत अरू कसैको समस्या हो, जुन व्यस्त व्यक्तिको लागि आदर्श हो।
घर मालिकहरू र भाडामा लिनेहरूले अधिकांश सुविधाहरूको लागि यात्रा गर्नुपर्दछ, जबकि कन्डोमा यो सबै आधारमा हुन्छ।
स्वामित्व तपाईका लागि पर्याप्त छैन? यहाँ भाँडामा लिने केही सुझावहरू छन्।
कन्डो भाडामा लिने सल्लाहहरू:
तपाईलाई के चाहानुहुन्छ र घरमा के चाहिन्छ भनेर सूचीत गर्नुहोस्।
तपाईंको सूचीको बारेमा तपाईंको रियाल्टरसँग भेट्नुहोस्।
तपाईको भाडामा लिने जिम्मेवारीहरू मालिकको जिम्मेवारीहरू के हो भनेर पत्ता लगाउनुहोस्।
एक पटक भन्दा धेरै र अफ टाइममा पनि ठेगाना हेर्नुहोस्। काम पछि कामको हप्ता भन्दा पछि सप्ताहन्तमा वातावरण फरक हुनेछ।
तपाइँको मासिक भाँडा कभर हुन्छ चर्चा गर्नुहोस्, र तपाइँको अन्य शुल्क के हो र के कति थाहा छ।
किन्न वा भाँडामा, शीर्ष कोन्डो जाँच गर्नुहोस् तपाईंको क्षेत्रमा। तपाई जुन उमेर वा जीवनको चरणमा हुनुहुन्छ भन्ने कुराको फरक पर्दैन, त्यहाँ तपाईंको लागि कन्डो डिजाइन प्रवृत्ति भइरहेको छ।
पोस्ट घर जग्गा लगानी | Tagged कन्डोका फाइदाहरू | टिप्पणी छोड्नुहोस् |
प्रकाशित अगस्ट 8, 2019 by रुडयार्ड
अन्तिम अद्यावधिक गरिएको: अगस्त 8, 2019 02: 11
5 कारणहरू तपाईंले साइप्रसमा घर किन्नु पर्छ
धेरै जसो अमेरिकी शहरहरूमा बस्ने लागत बढ्दै छ। न्यु योर्क र क्यालिफोर्निया जस्ता प्रमुख शहरहरूमा, एक घरको औसत मूल्य क्रमश: $ 600k र $ 300k भन्दा बढि छ। यी शहरहरूमा आरामसँग बस्न, तपाईलाई हरेक महिना हजारौं डलर चाहिन्छ। परिणाम स्वरूप धेरै व्यक्ति यी शहरहरूबाट ती शहरहरूमा सर्दै छन् जुन तुलनात्मक रूपमा सस्ता छन्। अरूले युरोपका अन्य देशहरूमा अमेरिका छोड्दैछन्। साइप्रस मुख्य गन्तव्यको रूपमा देखा पर्‍यो। यो लेखले तपाइँ साइप्रसमा घर किन्न चाहानुहुन्छ भनेर वर्णन गर्दछ।
पोस्ट घर जग्गा लगानी | Tagged घर किन्नुहोस्, घर क्रेता | टिप्पणी छोड्नुहोस् |
प्रकाशित जुलाई 29, 2019 by realtyWW
अन्तिम अद्यावधिक गरिएको: जुलाई 29, 2019 12: 36
घर जग्गा लगानीकर्ता बन्नका फाइदाहरू
त्यहाँ सबै प्रकारका लगानीहरू छन् जुन मानिसहरू आजका दिनहरूमा संलग्न हुन्छन्, जस मध्ये केही एकदम सुरक्षित हुन्छन् जबकि अन्यले ठूलो जोखिमहरू समावेश गर्दछन्। जब यो सुरक्षित लगानीको कुरा आउँदछ, एक प्रकार जुन धेरै मानिसहरूले हालसालैका वर्षहरूमा सामेल हुने निर्णय गरे घर जग्गाको लगानी हो। यस प्रकारको लगानीले धेरै किसिमका फाइदाहरू प्रदान गर्दछ र धेरै व्यक्तिलाई धेरै पैसा कमाउन मद्दत गर्दछ।
राम्रो समाचार यो हो कि यदि तपाईं भर्खरको सम्पत्ति लगानीको साथ सुरू गर्दै हुनुहुन्छ भने, त्यहाँ धेरै अनलाइन उपकरणहरू र संसाधनहरू छन् जसमा तपाईले सहयोगका लागि जान सक्नुहुन्छ पढाइ जारी राख्न →
पोस्ट घर जग्गा लगानी | Tagged पहिलो पटक लगानीकर्ता | टिप्पणी छोड्नुहोस् |
प्रकाशित 28 सक्छ, 2019 by realtyWW
अन्तिम अद्यावधिक गरिएको: मई 28, 2019 20: 29
Bitcoin को साथ घर जग्गाको लागि भुक्तान गर्दै
Bitcoin भुक्तानीको डिजिटल विकेन्द्रीकृत विधि हो र प्रयोगकर्ताको पहिचान निजी रहन्छ भने पनि, हरेक बिटकइनको लेनदेन ब्लॉकचेन टेक्नोलोजी प्रयोग गरी पत्ता लगाउन सकिन्छ। यो एक डाटाबेस हो जुन बिटकॉइन समुदाय द्वारा साझा गरिएको हो। बिटकॉइन कर पूर्ण रूपमा देशमा निर्भर छ, अमेरिकामा आईआरएसले भने कि उनीहरूले यसलाई सम्पत्तीको रूपमा लिएका छन्, र उनीहरूले प्रत्येक लेनदेनलाई पूंजीगत लाभ करको रूपमा गणना गर्छन्।
सम्पत्ती खरीद गर्न कसरी बिटकोइन प्रयोग गर्ने
एक लेनदेन को लागी मात्र चीज आवश्यक छ कि दुवै पक्षहरु यस विधिमा सहमत हुन। बिटकॉइन आशावादीहरूले बिजेताइन जस्तो पिज्जा जस्ता विभिन्न चीजहरू किन्न प्रयास गरिरहेका छन्, डाक्टरको भ्रमणका लागि भुक्तान गर्नुहोस् र सम्पत्ति पनि किन्नुहोस्। पढाइ जारी राख्न →
प्रकाशित9सक्छ, 2019 by एमेली लरेन्स
अन्तिम अद्यावधिक गरिएको: मई 9, 2019 04: 53
घर जग्गामा लगानी गर्दा के फाइदा हुन्छन्?
के तपाईले घर जग्गाको बारेमा कहिले सुन्नुभयो? के चीजहरू छन् कि लगानीकर्ताहरूलाई सफल बनाउनुहोस्? यदि तपाइँ यस प्रश्नको उत्तर पनि खोज्दै हुनुहुन्छ भने यस पोष्टले तपाइँलाई मद्दत गर्दछ। यदि एक व्यक्तिलाई थाहा छ कि उसले वास्तवमा व्यक्तिगत र आर्थिक रूपमा के चाहन्छ भनेर जान्छ भने, तिनीहरू जोखिम लिन सक्ने हुन सक्छन्। तपाईले सफलता पाउनुहुने छैन यदि तपाईं कलेज डिग्री वा केहि अरुसँग भविष्यवाणी गरिरहनु भएको छ। तपाईंको लगानी सुरक्षित गर्न तपाईंसँग केहि अन्य तरिकाहरू छन्। तपाईं केहि बाट मार्गदर्शन लिन सक्नुहुन्छ पढाइ जारी राख्न →
प्रकाशित अप्रिल 23, 2019 by रुडयार्ड
अन्तिम अद्यावधिक गरिएको: अप्रिल 23, 2019 06: 17
के माउन्टेन सम्पत्ति स्वामित्व तपाईंको सपनाको भाग हो?
मुख्य सुझावहरू जब तपाईंलाई भूमि सम्पत्तीमा लगानी गर्नुपर्दछ
के तपाईं कल्पना गर्नुहुन्छ कि तपाईं आफैंले पहाडको घरमा आगोले एक दिन पछि आराम गर्दै हुनुहुन्छ? वा जाडो ब्रेक मा बच्चाहरु संग स्कीइ?? तपाईं आज जग्गा सम्पत्तिमा प्रारम्भिक लगानी गरेर तपाईंको सपनातिर काम गर्न सुरु गर्न सक्नुहुन्छ। चाहे तपाईं आफ्नो सेवानिवृत्तिको योजना बनाउँदै हुनुहुन्छ, नयाँ छुट्टी गन्तव्यको खोजी गर्दै हुनुहुन्छ, वा केवल लगानी गर्न चाहानुहुन्छ, कोलोराडो छनौट गर्नको लागि उत्तम स्थान हो - र यो बजार बढिरहेको बेलामा अगाडि बढ्न उत्तम हो। डेन्भर शहर, वरपरका पहाडी समुदायहरू, र उत्तरी-कोलोराडोका क्षेत्रहरू सबैले चरम वृद्धि अनुभव गरिरहेका छन्। पछिल्ला केही वर्षहरूमा नयाँ सम्पत्ती मालिकहरूले लगानीमा अद्भुत प्रतिफल देखिसकेका छन्। पढाइ जारी राख्न →
पोस्ट घर जग्गा लगानी | Tagged सम्पत्ति लगानी | टिप्पणी छोड्नुहोस् |
1 पृष्ठ 1512345अर्को>अन्तिम »